Ihe ọkacha mmasị na ịtụkwasị obi na teknụzụ? | Martech Zone
Oge maka ule ozo! Achọrọ m ịhụ ma ọ bụ ịnwe m na ọkacha mmasị gị Technorati na-abawanye ogo nke blọọgụ m. Nke a bụ nseta ihuenyo nke ọkwa m ugbu a, naanị ka ị mara na anaghị m adọta ajị ahụ n'anya gị:
Y’oburu n’onyeghi, aga m akwado Technorati. Lee njikọ ị gbakwunye m ọkacha mmasị gị:
Nke a bụ nkwa m kwere gị… M ga-agbakwunye gị niile na ọkacha mmasị m ozugbo m hụrụ na ị gbakwunyela m. Izu na-abịa, m ga-elele ọkwa ahụ anya ma ziga ọkwa ahụ mgbe ụfọdụ folks tinye m.
Sep 8, 2006 na 11:37 PM
Echeghị m na ha gụrụ - ha bụ ụzọ ọzọ iji kwalite elitism na blogosphere, echere m.
(Ee, akwadoro m onwe m!)
Sep 9, 2006 na 5: 47 AM
Ezi echiche maka ule Doug, gbakwunye gị dị ka ọkacha mmasị. Ka anyị hụ ma ọ na-eme iche.
Sep 10, 2006 na 12:50 PM
Dị ka m maara, ọ dịghị agụta.
Agbakwunyere gị na ọkacha mmasị m, ebe ọ bụ na m na-agbanyeghị ụtụ magazin site na RSS 🙂
Sep 10, 2006 na 8:43 PM
Echere m na ndi be unu ziri ezi. M na enwetatụbeghị a di na nwunye ọzọ zoro aka na saịtị m otú m ogo gbagoo; agbanyeghị, ọ pụtaghị na ọkacha mmasị emetụtawo ya.
N'ụzọ na-akpali mmasị na-ezuru, emechara m otu n'ime ndị folks ahọrọ ya dị ka ọkacha mmasị nke ọkacha mmasị m ma ekwenyere m na ọ nyere aka ogo ya. Mana a họọrọ ya na mpaghara 900,000 +. Mgbe m kara akara ya dị ka ọkacha mmasị m, ọ kwagara ruo ihe dị ka 844,000.
Ikekwe ọ na-enyere aka na ogo ahụ mgbe ederedeghị gị na blọọgụ ndị ọzọ? Hmmm.
Sep 11, 2006 na 7: 11 AM
Ọ bụ ihe dị mma nye m na ọkacha mmasị anaghị agụta, ma ọ bụ na agaghị m enwe ebe ọ bụla na ogo ahụ!
BTW, okwu mgbochi spam anaghị ahụ gị anya na IE7. Ikwesiri ịkwụsị ya 🙁
Sep 14, 2006 na 10: 40 AM
SEOmoz na-eme nnwale ụfọdụ n 'usoro ndị a:
SEOmoz Teknụzụ Top 100